वामदेव विरुद्ध ईश्वर पोख्रेलको डर लाग्दो रुप, यसरी गर्छन गौतमलाई हराउन मिडियालाई प्रयोग « Light Nepal
Published On : 10 October, 2018 4:06 pm
पत्रकारिता आफ्नो आचारसहिंता अनुसार चलेको हुन्छ । कुनै पनि पत्रकारले त्यही पत्रकारिताको आचारसंहितालाई गाइडलाईन मानेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । विश्वको पत्रकारिता पनि त्यही अनुसार नै चलेको हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेको हुन्छ । पाठकले नि त्यही आचारसहिंतामा रहेर लेखिएको समाचारलाई बढि पढ्ने गर्दछ । तर नेपालको पत्रकारितामा त्यो आचारसंहिता प्रयोग नगरि पितपत्रकारिता गरेको पाइन्छ । र पित पत्रकारिता गराउने नेपालमा पछिल्लो समय एउटै मात्र नेता हुन् रक्षा मन्त्री समेत रहेका नेकपामा नेता ईश्वर पोख्रेल ।
पछिल्लो समय देशको राजनीतिक माहोल पुर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एंव नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेवको पेरिफेरिमा घुमिरहेकै बेला यस्ता समाचारको शिर्षक नै मेरोलागि निकै रोचक बन्न पुग्यो । यसै पनि वामदेवको विषय पछिल्लो समयमा मेरोलागि मात्र नभई सबैकालागि नेपाली राजनीतिमा गौतमको भुमिका अब के हुन्छ होला त ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भई एउटा गम्भिर र रोचक विषय बन्न पुगेको छ । त्यसमा पनि नेकपालाई नै कहर लगाउने गरि वामदेवले किन यस्तो रहर जगाएछन् त ? भन्ने कौतुहलतामा मैले समाचार पढें ।
असोज २३ गते एउटा अनलाईनमा प्रकाशित समाचारको केही अंश जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्न चाहें, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हरेक बैठकमा शीर्षनेताहरु वामदेव गौतमको किचकिचबाट आजित बनेका थिए । उनीहरु पार्टीको बैठक नसकिँदै बाहिर निस्किने बाहना खोज्थे ।
स्रोतका अनुसार पार्टीको हरेक बैठकको अन्त्यतिर ‘एकछिन एकछिन’ भन्दै वामदेवले आफू चुनाव लड्ने प्रसंग निकाल्थे । कहिले डोल्पा, कहिले दैलेख त कहिले बाँकेबाट चुनाव लड्छु भन्दै शीर्षनेताहरुलाई उनले ‘इरिटेड’ बनाइसकेका थिए । डोल्पाका धनबहादुर बुढालाई पर्यटन राज्यमन्त्री बनाइनुको मूल कारण वामदेव नै हुन् ।